ရန်အောင် အတွက် စိုးမြတ်သူဇာရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း
ဒီနေ့ကတော့ အကယ်ဒမီရန်အောင်ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီနေ့ (ဒီဇင်ဘာလ ၁၄) ရက်နေ့က ရန်အောင်ရဲ့ အသက် ၅၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်. ဒီ့အတွက်ကြောင့် အနုပညာရှင် ညီမငယ်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာက အခုလို မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်.
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ရန်အောင်ရဲ့ အသက် ၅၂ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူဇာက မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားဆို ခဲ့ပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း သူတို့ နှစ်ယောက်က အနုပညာအလုပ်တွေ ဆက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်.
''ချစ်သော အကိုကြီး သက်ရှည် ကျန်းမာ အခုထက်ပို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း Happy Birthday ပါ အစ်ကိုကြီး'' ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ မနက် ၃ နာရီ ၅၈ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် ရိုက်ကွင်းပေါ်က ရန်အောင်နဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံကိုလည်း တင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်.
အကယ်ဒမီ ရန်အောင်နဲ့ အကယ်ဒမီ စိုးမြတ်သူဇာတို့ဟာ ဟိုးအရင်ကတည်းကနေ အခုအချိန်ထိ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်. လက်ရှိမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ အတူတူ ရိုက်ကူးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကလည်း ဇာတ်ကား ထဲမှာသာမက . ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာရော. အပြင်လောကမှာပါ တစ်ရင်းတနှီးရှိကြတဲ့ အနုပညာမောင်နှမတွေ ဖြစ်ပါတယ်.
သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်သူဇာက အနုပညာအကိုတွေဖြစ်တဲ့ ရန်အောင်နဲ့ အတူ ရဲအောင်ကိုလည်း တန်ဆောင်မုန်းလ တုန်းက နာရီဆင်တူလေးတွေနဲ့ ကန်တော့ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သီတင်းကျွတ်ရောက်တိုင်း အစ်ကိုတွေကို အမြဲတမ်း ကန်တော့ဖြစ်နေတဲ့ သူမဟာ ဒီနှစ်သီတင်းကျွတ်အတွက် မကန်တော့ရသေးတာကြောင့် နိုဝင်ဘာ(၁၂) ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့က "ချယ်ရီဦး"နာရီဆိုင်ဖွင့်ပွဲသွားရင်း တစ်ခါတည်း ကန်တော့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်များစွာ အောင်မြင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရန်အောင်၊ စိုးမြတ်သူဇာတို့ဟာ အခုချိန်ထိ အနုပညာနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်တွေကို ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သူတို့ဟာ အခုချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိနေသူတွေပါ။
Photo: Yan Aung , Soe Myat Thuzar